Vaovao - Manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 20 feb, hankalaza ny fetin'ny lohataona isika mandritra ity perioud ity. Miala tsiny amin'ny zavatra tsy mety aminao ary azafady mifandraisa amiko raha misy zavatra maika tokony hahazoanao valiny. Te-hanararaotra ity fotoana ity aho mirary soa indrindra ho anao sy ny ankohonanao ho an'ny taom-baovao sinoa sambatra sy salama!
Manomboka amin'ny 5 feb ka hatramin'ny 20 feb, hankalaza ny fetin'ny lohataona isika mandritra ity perioud ity. Miala tsiny amin'ny zavatra tsy mety aminao ary azafady mifandraisa amiko raha misy zavatra maika tokony hahazoanao valiny. Te-hanararaotra ity fotoana ity aho mirary soa indrindra ho anao sy ny ankohonanao ho an'ny taom-baovao sinoa sambatra sy salama!
Fetin'ny lohataona 2020
Manomboka amin'ny 5 febfaha hatramin'ny 20faha , hankalaza ny fetin'ny lohataona isika mandritra ity perioud ity. Miala tsiny amin'ny zavatra tsy mety aminao ary azafady mifandraisa amiko raha misy zavatra maika tokony hahazoanao valiny. Te-hanararaotra ity fotoana ity aho mirary soa indrindra ho anao sy ny ankohonanao ho an'ny taom-baovao sinoa sambatra sy salama!
Misaotra tamin'ny fiheverana tsara sy ny fanohananao!
Kitapo router misy diamondra miovaova（ny haitao vaovao）
Fitaovana fanapahana bitika bitika cnc router ho an'ny marbra vato sy granite
Miaraka amin'ny tombony amin'ny maranitra, ny fanoherana tsara kokoa, ny fifamatorana mafy ary tsy mora esorina, io no fitaovana fikosehana shank kely tsara indrindra, ny fikosoham-bary dia azo ampiasaina ho toy ny faribolana anatiny, boribory, hady, arc, cone ary faritra manokana hafa.
Ny tsy fitovizan'ny vokatra sinter, electroplated ary brazed:
1) Ny androm-piainana lava indrindra
2) Fanekena ny tsena avo
3) Fampiasana be dia be: Azo ampiasaina amin'ny fanapahana microcline, tile, beton, granite, marbra ary vera
2. Misy herinaratra
1) fametrahana mazava tsara
2) Tsara kokoa noho ny Brazed ny maranitra
3) Azo ampiasaina amin'ny fanapahana marbra sy vera
4) Tsy chipping
1) Teknolojia vaovao, integral tsara kokoa noho ny teo aloha
2) Ny androm-piainana lava kokoa noho ny electroplated
3) Fahombiazana avo kokoa noho ny sinter
4) Tsara na amin'ny fanapahana maina na amin'ny fanapahana lena
5) Azo ampiasaina amin'ny fanapahana marbra sy vy